Madaxwayne Xigeenka Puntland ayaa qabtay Shir Jaraa”id | maakhir.com
Madaxwayne Xigeenka Puntland ayaa qabtay Shir Jaraa”id
March 14, 2008 in Somalia
Garoowe:- Madaxwayne Xigeenka Puntland Xasan Daahir Maxamuud (Afqudhac) ayaa maanta shir jaraaid ku qabtay Magaalada Garoowe ee Caasimadam Puntland waxana uu shirkiisaa ku soo qaatay dhawor qodob oo aad xasaasi u ah kuwaasi oo ay ka mid yihiin Amaanka, iyo eedayn ay dhawaan Puntland u soo jeedisay Ha”adda xuquuqda Bini”adanka u dooda taasi oo uu jawaab ka bixiyay.
Waxa uu sheegay Madaxwayne Xigeenku inay dhawaan shaacisay Hay”adda u dooda Xuquuqa Bini”adanka inay Maamulka Puntland tacadiyo u gaysteen Maxaabiista Dagaalka lagu qabto oo ay sheegtay inay Jeelasha Maamulka Puntladn Buux dhaafiyeen, arinkaasi ayaa waxa uu aad uga jawaabay Mr Afqudhac isaga oo sheegay inay Hay”addaasi faafisay war aan sal iyo raatoona lahayn ayna Puntland Maxaabiista ula dhaqanto si fiican.
Madaxwayne Xigeenku waxa kaloo uu soo qaatay Dil habeenkii xalay ahaa loo gaystay mid ka mid ah Saraakiisha Sirdoonka ee Maamulka Puntland kaasi oo xalay lagu dilay gudaha Magaalada Bosaaso,waxana uu sheegay inuu dilkaasi aad u canbaaraynayo isaga oo farta ku fiiqay inay dilkaasi gayteen kuwa Nabada Maamulka Puntland Majaxaabinaya.
Afqudhac waxa kaloo uu sheegay inay Booliska Magaalada Bosaaso wali ku raad joogaan kuwii Dilkaasi Foosha xun gaystay uu sheegay in hadii gacanta lagu soo dhigi Talaabo cad laga qaado.
Hadalka Xasan Daahir Maxamuud ayaa ku soo aaday xili Amaanka Maamulka Gobleedka Puntland aad uga soo darayo,waliba kan Magaalada Bosaaso oo ah mid aan laysku halayn karin,iyada oo ay xiliga habeenkii ah ka dhacaan dilal joogta ah iyo Boobka lagula kacayo dadka Rayidka ah.
« Yeman oo walaac xun ka muujisay Muhaajiriinta ku soo foole Dalkeeda
Afhayeen u hadlay Milliterga DFS ayaa sheegay inay keenayaan is bedel »